Degdeg: Shirkad Faransiis ah oo soo bandhigtaa "daawadii ugu horreysa" oo lagu daaweeyo bukaannada coronavirus – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Degdeg: Shirkad Faransiis ah oo soo bandhigtaa “daawadii ugu horreysa” oo lagu...
Degdeg: Shirkad Faransiis ah oo soo bandhigtaa “daawadii ugu horreysa” oo lagu daaweeyo bukaannada coronavirus
Saxaafadda Faransiiska ayaa sheegtey in shirkada “Sanofi” ay soo bandhigaysaa dawada ka hortagga duumada/kaneecada ee Blaquenel si loogu daaweeyo 300 kun oo qof oo qaba cudurka Corona, wakaaladda “France Press” ayaa Arbacadii werisay.
Kooxda Sanofi waxay ku dhawaaqday in Blackknell, dawada ka hortagga duumada ee ay soo saarto, ay muujisay natiijooyin “ballanqaad” ah oo lagu daaweynayo bukaannada qaba cudurka ‘coronavirus’, sidaas darteedna ay diyaar u yihiin inay malaayiin qaadasho siiyaan mas’uuliyiinta Faransiiska.
Afayeen u hadlay kooxda ayaa u sheegay France Press in marka la eego natiijada dhiiri gelinta ah ee daraasad lagu sameeyay dawadan, “Sanofi wuxuu balan qaadayaa in dawadiisa uu gaarsiin doono dhaman Faransiiska isla markaana uu bixiyo malaayiin Qaaadasho dawadan, tiradaas oo ogolaan karta in lagu daweeyo 300,000 oo bukaan,” isagoo carabka ku adkeeyay isla waqtigaas in kooxdu Isagoo doonaya iney la shaqeeyaan maamulka Faransiiska “si loo xaqiijiyo natiijooyinkaas.”
Talaadadiina tirada dhimashada Corona virus-ka ayaa ka badan 7900 kiis oo adduunka oo dhan ah, halka tirada cudurrada ay ku dhowaatay 200 kun oo cudurka qaba.
Sidoo kale Talaadadii, Shiinaha ayaa oggolaaday tijaabooyinka caafimaad ee ‘tallaalka’ ugu horreeya ee la soo saaray si loola dagaallamo coronavirus-ka cusub, wax ka yar 24 saacadood kadib tijaabooyin tan la mid ah oo ka dhacay Maraykanka.
Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday the Daily Daily, Shiinaha ayaa oggolaaday tijaabooyin caafimaad oo ku saabsan tallaalkeedii ugu horreeyay ee lagula dagaallamo fayraska Corona.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in lagu soo darey Tijaabooyinka kooxda cilmi-baarista ee ka shaqeysa tijaabooyinka uu hogaaminayo Dr. Chen Wai oo ka tirsan Akadeemiyada Cilmiga Caafimaadka ee militariga Shiinaha.